umsebenzi Bank yigama sasivumela ezibanzi, okubandakanya zezomnotho nge amazinga ehlukene olwazi namakhono, ezisukela cashier elula futhi liphetha ngamazwi abaholi. Kodwa noma yimuphi umsebenzi onjalo kufanele imfundo ekhethekile emkhakheni wezomnotho. I bafaneleka kangcono yasebhange isisebenzi, amathuba ngaphezulu uthola wena ukuya phezulu isitebhisi umsebenzi.
Esanda kutholakala, bebhange abangu conservatively abagqoke, amadoda ethule, abanokuhlangenwe imfundo ephakeme, futhi bayakwazi ukukhuluma ngokukhalipha. abasebenzi ezinjalo ngemva nje kokuqeda isikole beza sikhungo credit ngenjongo yokusebenza khona impilo yami yonke futhi ube umholi.
Kuze kube manje, i-mbono onjalo asihlobene. abasebenzi Bank bomma, futhi phakathi abaholi betholakala khona kaningi. Futhi kwakumangalisa ukusebenza ebhange abasezikhundleni ayisekho ukumane nokususa iphepha, it has a focus okukhulu ku ukudayiswa amasevisi asebhange.
Yiziphi izidingo eziyisisekelo eziphoqelelwe?
Ngaphambi ufaka sevisi ngempela isifinyezo isisebenzi sasebhange, kanye nanoma yimuphi omunye. Ngisho kungekho isipiliyoni kuwo kumele kukhonjiswe ezomnotho okuhambisanayo.
Ukuze usebenze in the isikhungo isikweletu kufanele kubhekwe kanye futhi ngokushesha kubo bonke imibhalo, kanye nokuhlinzeka cikelela nokubekezela. Esinye sezici ezibaluleke kakhulu kwanoma iyiphi umsebenzi ebhange unesibopho. Iningi abasebenzi of credit izikhungo yonke imisebenzi usuku namaklayenti lwezigaba ezahlukene, ubudala kanye nokungena kwemali.
Ngakho-ke, ukusebenza ebhange, kumele ube uhlamvu olinganiselayo ukuxhumana nabantu bekulokhu ezolile njalo. izimfanelo ezibalulekile okufanele uneminye isisebenzi sasebhange, ukubekezela, kanye ukumelana ukucindezeleka, njengoba kufanele kube lula ukuqonda ezingalindelekile izimo angajwayelekile, ukuze ugcine amakhasimende futhi wenze ibhange okuhle idumela.
Yini iholo ebhange?
Umholo komsebenzi yasebhange zingase zihluke kakhulu. I emincane kunayo yonke kwabaphathi bemali, ngisho nalapho kunjalo, kulesi sikhundla iyona esinzima kunazo zonke. Kodwa isikhundla isisebenzi yemali kuyisinyathelo sokuqala lapho ukugibela isitebhisi umsebenzi. Iningi zezinhloko ezikhungweni ezahlukene zezimali ukuqala nalo. I Amaholo anesilinganiso abaphathi phakathi, hhayi kuhlanganise abaphathi. Isebenza nabantu ukubandakanywa amakhasimende, njengoba yona, uthole ibhekwa okuhle.
Kufanele Ngisebenza ebhange?
Singasho ukuthi isisebenzi yasebhange emsebenzini ahlukahlukene, ehlonishwayo futhi ezithakazelisayo. Ngokuvamile, kusetshenziswa msebenzi inikezwa eziqinile sokusebenza. Kodwa imisebenzi efana adinga sezingeni leliphakeme lekwati professional nokuxhumana namakhasimende e ezahlukene, izimo ngezinye izikhathi kwakuba nzima. Suka ebhange kwenye akulahlwa, ikakhulukazi uma kwenziwa yokwakha ama-career. Kwezinye zalezi izikhungo e zokuphatha kubantu, ababevela ngaphandle, kunokuba nalezo ezazisebenze ebhange ukusebenza.
Esikudingayo ulwazi nokuhlangenwe nakho?
Ngokuphathelene ulwazi, ubungcweti yebhange umsebenzi ngempela zidinga ulwazi lonke ulwazi mayelana nezinsiza yasebhange kanye nemikhiqizo. Abasebenzi kumele bakwazi ukunikela imikhiqizo yasebhange, isibonelo, vula i-akhawunti, uthole imali-mboleko noma idiphozi. Khona-ke konke kuzoncika ekutheni ziyenze kanjani isisebenzi igxile lezi zinkinga, ngokulandelana, ngokuqondene nale kuzokhulisa yakhe abafundele umsebenzi. Omunye kumele njalo ukuhlola izinto ezintsha futhi bathengise noma iyiphi imikhiqizo noma amasevisi we ibhange, uma uphethe ngokuthi eliphezulu kanye ngamakhasimende bonke ubungozi kanye namathuba okuhlotshaniswa nakho.
Enye imfuneko, okumele luhambisane isisebenzi sasebhange, kuyinto ukutholakala amakhono kwezohwebo, ikhono omuhle ukuxhumana namakhasimende kanye nokugcina ingxoxo. Lokhu kusikisela ukuthi umsebenzi kumele akwazi ukuba ubambisane iklayenti futhi ukwakha ubambiswano nabo. Ngiphakathi iklayenti ayikwazi bahlala banganandaba uma iphathwa ngobuhlakani, ngozwelo nangokwenza umsebenzi ngendlela ngokucophelela.
amabhange Iningi ozama ukuheha abantu abasha ukuba basebenze, njengoba nje kuvamile namanje ngokushesha okuningi kunalokho lokumba emakethe futhi kulula ukulungisa kubo. bebhange banamuhla bakholelwa ukuthi abantu abangekho angaphezu kwamashumi amane nanhlanu, asetshenziselwa ukuthola iholo, ikakhulukazi ngaphandle wafifiyela, njengoba basakhumbula simiso esidala. Lokhu kusho ukuthi umuntu ngamunye.
Ziyini izinzuzo owenza umsebenzi ebhange?
Ungahlala ukuya cwaningo ikhefu esemthethweni phakathi ukuqeqeshwa ngeposi, sekhefu lonyaka, sokubeletha noma ukugula. Konke zikhokhelwa yilowo yasebhange.
Une iholo ezinzile, amabhonasi kanye ezihlukahlukene inkokhelo eyengeziwe.
Izimo ababesebenza kuzo zinhle kakhulu: kukhona ahlanzekile, ethule, ifakwe zesimanje ezenza, ifenisha ukhululekile, ibha umthamo, isikhungo wezokwelapha, indawo ukubhema nokunye.
Umsebenzi eyenziwa ukufinyelela ku-computer Inthanethi. Kodwa lapha konke kuncike kahle hle ukuthi yiziphi yasebhange umnyango usebenza nge.
Isheduli Permanent bese usetha amahora ukusebenza imithetho.
I-oda yokwemukela isikhundla edingekayo ugagule amahora yakho ukusebenza, futhi uma kukhona isizathu kufanele kusetshenzwe, singakwazi ngokuphepha ukucela imali. Nakuba le nkinga ingaphezu a subjective, ngoba konke kuncike inqubomgomo bezingelwa ukuphathwa yebhange. Kodwa umsebenzi singemuva kuyinsakavukela ngeke unomphela.
Ukukhuluma njalo. Uyobe uzungezwe by eziningi abantu abangekho abasebenzi kanye namakhasimende ebhange. Ngakho, umsebenzi ebhange - ukusebenza nabantu.
Okumbi ukusebenza ebhange
yokugqoka okuqinile. Kufanele bayakhohlwa zonke izinhlobo jeans futhi izikibha. Udinga bagqoke up kakhulu ngesimo - phezulu abamhlophe, abansundu phansi - futhi bagqoke izingubo imithetho eqinile.
izinsuku ezinhlanu ngesonto wena emsebenzini, ngakho ukuze ngixazulule izinkinga siqu ziyasuswa ngempelasonto kuphela noma kufanele ushiye ukuba ashiye noma bayeke kuze kube komunye.
Inani elikhulu abaphathi bakhe. Uma umsebenzi elula, khona-ke ongema ku izinduna eziningana ezahlukene, abangakwazi nganoma yisiphi isikhathi ukuze uxhumane nawe ngemibuzo, ucelwa ukuba uthumele noma yimuphi umqulu noma ukunikeza noma yimuphi inkomba.
Uma ibhange ezincane, kungenzeka ukuthi kuyinto "umndeni." Lokhu kusho ukuthi ngokushesha ngihola kahle siyonikwa, kodwa kuthatha isikhundla esiphakeme isihlobo noma umngani oseduze wabasunguli kuphela.
Uma kungukuthi ukusebenza imali, khona-ke banesibopho imibhalo ephathelene ukuhamba izimali, izibambiso kanye ikhasimende ukuhlonza.
Lapho ekhetha umsebenzi yebhange umsebenzi ungaqiniseka ukuthi umsebenzi uyohlale uyiyo, ngoba amabhange kudingeka kakhulu kanye nochwepheshe yonke indawo. Zonke eyinkimbinkimbi Kuyaphawuleka ukuthi ngokukhetha umsebenzi, wena besaboshiwe, okungukuthi, ithuba ukusebenza bona.
Njengoba ubona, emihle nemibi kule mkhakha ngokwanele. Kulokhu, ukukhetha kuzoya kakhulu ngokuthi yikuphi lokho okuyizidingo eziseqhulwini nezinjongo wena ekuphileni. Nxa bephenduka ohlangothini yasebhange, bese ngokuhamba kwesikhathi une wena hlaziya izici zalo msebenzi onzima.
I-Messenger Bank Izibuyekezo amakhasimende esibonga
Ibhange "Tinkoff" - izibuyekezo, ekuhlaziyeni
Izibuyekezo. "RosinterBank": imali, ukubolekisa
Amanani ku ezifakwa namuhla Rosselkhozbank: yamanani kanye inzuzo
"Ukuphila Klim Samgin": isifinyezo kule noveli
Amahlaya abangamaJuda: izingcaphuno. amahlaya Funny Jewish
Wazi kanjani kahle yakho e World of Tanks?